May 26, 2021 - Channel Lover
သငျ့ ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ဒါတှေ ထားနရေငျတော့ သခြောပေါကျ လာဘျပိတျ စပေါပီ…..
May 26, 2021 by Channel Lover
စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဝါစတုသျှတ္တရပညာအရစကြာဝဠာထဲမှာ အလိုအလျောက်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေရော လူသားတွေဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ မည်သည့်အရာမဆို အကုန်လုံးမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေကြတယ် ဆိုတာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့အခါမကောင်းတဲစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ် – ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်မယ်။ – ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလို လာဘ်ပိတ် တာတွေ။ – ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကိုသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် – ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလို – ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ – ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်)ငွေသေတ္တာထဲမှာ . . . . – ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊ receipt ဟောင်းများ – ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူများပုံ၊ … Read more
၂၀၂၁ မလေ (၂၇)ရကျနအေ့တှကျ တဈရကျတာ ဆောငျရနျ/ရှောငျရနျ မြား
Zawgyi ၂၀၂၁ မေလ (၂၁)ရက်နေ့အတွက် တစ်ရက်တာ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် များ ကံကောင်းစေသော အရောင် ( ကျောက်စိမ်းရောင်၊အဖြူရောင်၊အနက်ရောင်၊ရောယှက်ရောင် ) Lucky No. (1/5/7) ရှောင်ရမည့် အစားအစာများ ( အာလူးကြော်၊ လက်ဖက်၊ လိမ္မော်၊ ဇီးယို၊ အရက်၊ အုန်းရည် ) ဒုက္ခပေးနိုင်သည့်နေ့သား ( အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ) ယတြာ အိမ်ဘုရားတွင် ကန်စွန်းရွက်ကြော်နှင့်ဆွမ်း ဆပ်ကပ်လှူတန်းပြီး လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါလေ။ (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်း ၁ရက်တာကိစ္စများ အောင်မြင်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာဖြတ်သန်းနိုင်သော နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ အ-ဗျာပဇ္ဇာဟောန္တု- ဆရာအုန်းချစ်မြိုင် ကံကြမ္မာကျောင်းတော်ကြီး မရမ်းတလင်းယတြာအောင်မြေ Unicode ၂၀၂၁ မလေ (၂၁)ရကျနအေ့တှကျ တဈရကျတာ ဆောငျရနျ/ရှောငျရနျ မြား ကံကောငျးစသေော အရောငျ ( … Read more
မဲနတေဲ့ ဒူးခေါငျးတှေ တံတောငျဆဈတှကေို ခဏလေးနဲ့ ပွနျလညျဖွူဝငျးလာစမေယျ့ နညျးလမျး(၅)မြိုး
Zawgyi မဲနေတဲ့ ဒူးခေါင်းတွေ တံတောင်ဆစ်တွေကို ခဏလေးနဲ့ ပြန်လည်ဖြူဝင်းလာစေမယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး။ ဒူးခေါင်းတွေ တံတောင်ဆစ်တွေ မဲနေလို့သင်အရမ်းစိတ်ညစ်နေလား။ ဒူးခေါင်းတွေတံတောင်ဆစ်တွေ မဲနေတာကြောင့် ပျိုမေတွေက လက်ပြတ်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတို၊ စကပ်တိုဝတ်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဲနေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ဆဲလ်သေတွေ စုပုံးနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒူးခေါင်းမဲ တံတောင်မဲနေတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်း(၅)မျိုးကို အခုလိုပဲ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သခွားသီး – သခွားသီးဟာ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့နေရာမှာတော့ အရမ်းထိရောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ သခွားသီးကို မဲနေတဲ့ ဆဲလ်သေတွေအပေါ်မှာ ၁၅မိနစ်လောက်ကပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး တံတောင်ဆစ် ဒူးခေါင်းတွေကို အစိုဓာတ် ရရှိစေပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ တစ်ခါလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်လအတွင်း သိသာတဲ့ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာပါ။ ၂။ အုန်းဆီ – အုန်းဆီမှာ … Read more
မော်လမြိုင် Ocean စင်တာမှ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မ၀င့်ဝါခိုင်
မော်လမြိုင် Ocean စင်တာမှ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မ၀င့်ဝါခိုင် ကူညီပေးနိုင်ကြပါရန် … မော်လမြိုင် Ocean စင်တာမှ ပျောက်သွားတဲ့ မိန်းကလေး CCTV မှတ်တမ်းအရတော့ အပေါ့ခန်းကအထွက်မှာ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ အမည်မသိ အမျိုးသမီး (၂)ဦး ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေကယူဆပါတယ်။ ကောင်မလေးနာမည်က – မဝင့်ဝါခိုင် အသက် – ၂၉ နှစ် မိဘအမည် – ဦးတိုးလွင် + ဒေါ်အေးအေးမော် နေရပ်လိပ်စာ – ချောင်းဆုံ ဖြစ်စဉ်က မနေ့က ကောင်မလေးက သူ့မိဘတွေနဲ့အတူ မော်လမြိုင် Ocean Center ကို လာရင်း အိမ်သာသို့ သွားပြီးနောက် တခါတည်း အဆက်အသွယ်ပြတ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တန် ပြန်မရောက်လို့ မိဘတွေက စိတ်ပူပြီး CCTV မှတ်တမ်းတွေ … Read more
ယနေ့ညတွင် မိုးကြီးနိုင်သောမြို့များ(ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါ) ယနေ့ညတွင် မိုးကြီးနိုင်သောမြို့များမှာ မော်တင် ဟိုင်းကြီး လပွတ္တာ မော်လမြိုင်ကျွန်း ဖျာပုံ မြို့တို့ဖြစ်ပါတယ်…။ မသိသေးတဲ့သူတွေသိအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါ အားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေ source su su san unicode ယနညေ့တှငျ မိုးကွီးနိုငျသောမွို့မြား(ပွနျလညျမြှဝပေေးကွပါ) ယနညေ့တှငျ မိုးကွီးနိုငျသောမွို့မြားမှာ မျောတငျ ဟိုငျးကွီး လပှတ်တာ မျောလမွိုငျကြှနျး ဖြာပုံ မွို့တို့ဖွဈပါတယျ…။ မသိသေးတဲ့သူတှသေိအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးကွပါ အားလုံးဘေးရနျကငျးကွပါစေ source su su san ယနေ့ညတွင် မိုးကြီးနိုင်သောမြို့များ(ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါ) ယနေ့ညတွင် မိုးကြီးနိုင်သောမြို့များမှာ မော်တင် ဟိုင်းကြီး လပွတ္တာ မော်လမြိုင်ကျွန်း ဖျာပုံ မြို့တို့ဖြစ်ပါတယ်…။ မသိသေးတဲ့သူတွေသိအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါ အားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေ source su su san unicode ယနညေ့တှငျ မိုးကွီးနိုငျသောမွို့မြား(ပွနျလညျမြှဝပေေးကွပါ) … Read more
” နငျ့စကပျကို အပျေါနညျးနညျးတငျပေးရငျ ပိုကျဆံ တဈသောငျးပေးမယျ ” ဆိုတဲ့ လူပြိုကွီး ကို ပညာပေးလိုကျတဲ့ ကောငျမလေး
ကားပျေါမှာ လူပြိူကွီးနဲ့ကောငျမလေး အတူတူဆုံတော့ ကောငျမလေးက သူ့ခွသေလုံးဝငျးဝငျးလေးကို မမွငျ မွငျအောငျပွတယျ။ အဲဒီမှာ လူပြိူကွီးက အတငျ့ရဲပွီး ” နငျ့စကပျကို အပျေါနညျးနညျးတငျပေးရငျ ပိုကျဆံ တဈသောငျးပေးမယျ ” ဆိုတော့ ကောငျမလေးက ပိုကျဆံကို တခါတညျးတောငျးပွီးစကပျကို အပျေါတငျပေးတယျ။ နောကျ …ညု တုတုနဲ့ကွညျ့ပွီး ကောငျမလေးက ….” ရှငျ နောကျထပျတဈသောငျးထပျပေးရငျ ရှငျ့ကို ကလေးမှေးတဲ့နရော ပွမယျ “” ဟာ ” …. လူပြိူကွီး တံတှေးသီးသှားပွီး ပိုကျဆံ တဈသောငျးကိုလညျး လြှောလြှောလြူ လြူ ထုတျပေးလိုကျတယျ။ ကောငျမလေးက ကားရဲ့ ညာဘကျခွမျးကို လကျညိုးထိုးပွလိုကျတယျ။ ” တှလေ့ား… ရနျကုနျအမြိူးသမီး ဆေးရုံကွီး ” “ခှီးးးး သောကျကြိုးနဲ ဂငျြးမိပွီဟ….” … Read more
အိပ်မက်တွေက လူတိုင်းမက်ဖူးပြီး ဒီလိုမက်တိုင်း အထူး သတိထားပါတော့
အိပျမကျတှကေ လူတိုငျးမကျဖူးပွီး ဒီလိုမကျတိုငျး အထူး သတိထားပါတော့ သငျ ဒီအိပျမကျတှေ မကျဖူးရငျ ဒါတှဖွေဈခဲ့ပွီးပါပွီ အိပျမကျထဲမှာ သှားကြိုးတယျလို့ မကျဖူးကွမှာပါ။ ဒါဆို သတိထားစောငျ့ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလို အိပျမကျ မကျခွငျးက ကောငျးတဲ့ နိမိတျလက်ခဏာတှေ မဟုတျပါဘူး။ ဒါဟာ သငျ့အမြိုးထဲက သငျ့သူငယျခငျြးက သစ်စာဖောကျတဲ့ အဓိပ်ပာယျဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကွောငျ့လဲ ငှကွေေးအရှုပျအရှငျးတှေ ရှငျးရတတျတာဖွဈပွီးတော့ သငျ့ကို လူယုံတဈယောကျက နောကျကြောက ဓားနဲ့ ထိုးတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အိပျမကျထဲမှာ နောကျကနြတေတျပါတယျ။ သငျဟာ ရုံးကို ကြောငျးကို စာမေးပှဲခနျးကို နောကျကတြာမြိုး မကျဖူးပါလိမျ့မယျ။ ဒီအခြိနျမှာ သငျ့ရဲ့ နှလုံးခုနျလဲ မွနျနပေါလိမျ့မယျ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးကွုံရငျ သငျဟာ အပွငျမှာ လုပျငနျးခှငျမှာ ဖွဈဖွဈ သငျ့ကြောငျးမှာဖွဈဖွဈ သငျ့ကို တိုကျခိုကျခငျြသူရှိနပေါပွီ။ … Read more
လာမယ့် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးကြီးနိုင်သည့် မြို့များ
လာမယ့် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးကြီးနိုင်သည့် မြို့များ Zawgyi သတိပေးချက် အားအလွန်ကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) “ယာစ် (YAAS)”၏ အရှိန်ကြောင့် ယနေ့နံနက်မှ လာမည့် (၄၈)နာရီအတွင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ နေရာကွက်၍ မိုးကြီး နိုင်ပါသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းအလွန်ကြီးမည်။ မိုးသက် လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)မှ (၄၅) မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ (၁၃)ပေမှ (၁၇)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက် လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် … Read more
ခငျပှနျးသညျ အလုပျ အရမျးမြားနတောကွောငျ့ အခွား အမြိုးသား 300 ကြျောကို သူမနဲ့ ပတျသကျဖို့ သှေးဆောငျ ဖွားယောငျးခဲ့တဲ့ ဇနီးသညျ..
Zawgyi လူရာပေါင်း၊ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ ငွေနဲ့အခြားအရာတွေကို လိမ်လည်လှည့်စားဖို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အတုတွေနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ခင်ပွန်းကအလုပ်အရမ်းများနေတာကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေရနိုင်ဖို့ တခြားယောက်ျားတွေကို လိမ်လည်လှည့်စားခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့က ဒီကလေးနှစ်ယောက်အမေရဲ့အဖြစ်လိုပေါ့။ အဆိုပါကလေးနှစ်ယောက်အမေZhang ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်လောက်တုန်းမှာ Zhang မှအခြားနာမည်Zhou Moအဖြစ် နာမည်အတုသုံးကာ ခင်ပွန်းမရှိတဲ့မိခင်တစ်ဦးအဖြစ်အယောင်ဆောင်ပြီး သံသယကင်းတဲ့အမျိုးသားတွေကို သူမနဲ့ပတ်သက်ဖို့ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ကိုရှာဖွေဖို့အပြင် ယွမ် ၄၀၀,၀၀၀ကို သူမကလေးနှစ်ယောက်ကို ပြုစုဖို့၊အိမ်ဌားခ၊ဆေးကုသမှုစရိတ်တွေအတွက် လိုအပ်တာကြောင့် ကူညီပေးဖို့ဟန်ဆောင်တောင်းခံခဲ့ပြီး သူမရဲ့အချစ်ကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ Zhangရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ခံလိုက်စစ်ဆေးခဲ့တော့ လိမ်လည်မှုတွေခံရချေရှိတဲ့သားကောင်ဖြစ်သူတစ်ဦးက သူမရဲ့အကြောင်းစုံကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက Zhang ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး Zhang ရဲ့မိသားစုဝင်တွေက အတိတ်ကနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းသူမဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ဖမ်းဆီးပြီးတစ်လအကြာမှာမှ သူမရရှိတဲ့ငွေအားလုံးကို အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှာသုံးစွဲခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Zhang ကိုထောင်ဒဏ်ရှစ်နှစ်နှင့်ငါးလ ချမှတ်ထားပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ယွမ် … Read more
ကပ်ဆိုက်မယ့်အကြောင်း (1910)ခုနှစ်ခန့်ကတည်းကကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး
သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့နှင့် ၅ရက်နေ့အတွင်း မိုးရွားသွန်းနိုင်သည့် မြို့များ
ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဦးမေတ္တာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ Rဇာနည်
ငါတို့မသေချင်သေဘူးဟု အော်ဟစ်ခါ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် စောင့်စားနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ(ရုပ်သံ)